Chii Chinoshandisa Dhata Pane iPhone? Kushandisa Zvakawanda? Iyo Kugadzirisa! - Iphone
ios 10 yemunhu hotspot isiri kushanda
sei ichiti ichi chishongedzo chingasave chakatsigirwa
Zvinoreva mazizi mubhaibheri
Zvinotora nguva yakareba sei kuti mvumo yekushanda isvike mushure mekukumbira?
nei wachi yangu yeapuro yakamira kushanda
Nharembozha inodhura, uye kana iyo iPhone iri kushandisa yakawandisa data, bhiri raunogamuchira kubva kune anotakura rinogona kuvhundutsa, kutaura zvishoma. Kuita kuti zvinhu zviwedzere, vatakuri havagone kukuudza chero chinhu chinopfuura izvo foni iri kuita dambudziko - havagone kukuudza kuti chii kukonzera dambudziko. Zviri kwauri kuti uone kuti sei iPhone yako iri kushandisa yakawanda data, uye zvinogona kuvhiringidza zvikuru kana iwe usingazive pekutangira. Zvinogona kuve zvakaoma kuteedzera izvo zvinoshandisa dhata pane iPhone, asi ini ndiri pano kuzokuratidza kuti sei.
Muchikamu chino, ini ndinokubatsira kugadzirisa chakavanzika chekuti nei yako iPhone data yekushandisa yakakwira kwazvo. Tichatanga nekufukidza mashoma akakosha mapoinzi nezvekudzora kushandiswa kwedata kwe iPhone, uyezve isu tichaenderera kune mamwe ematambudziko chaiwo angave ari kukonzera yako iPhone kushandisa yakawanda data.
sei wadi ipad yangu kubatanidza kune wifi
Ini Ndinoziva Sei Kana Yangu IPhone Iri Kushandisa Nhare Dhata?
Kana yako iPhone yakabatana neWi-Fi, haisi kushandisa nharembozha, uye chero chinhu chaunoshandisa yako iPhone kuita hachiverengeki kuchipesana neyako data data. Saka zvakakosha kuti uzive kana yako iPhone yakabatana neWi-Fi uye painenge isiri, uye zviri nyore kutaura. Tarisa kumusoro kwekona kona yekona ye iPhone yako. Kana iwe ukaona chiratidzo chewairesi yeWi-Fi padhuze nezita rako rekutakura (muchimiro che baseball diamond), wakabatana neWi-Fi. Kana iwe ukaona LTE, 4G, 3G, kana chero chimwe chinhu padivi pezita remutakuri wako, yako iPhone iri kushandisa nharembozha.
Matatu Akakosha iPhone Data Kuchengetedza Matipi Unogona Kuve Une Kuziva
1. Shandisa Wi-Fi Panzvimbo peData
Nguva dzose shandisa Wi-Fi kana iripo. Kunyangwe pa Starbucks, McDonalds, Raibhurari, kana kumba, ita shuwa kuti yako iPhone yakabatana neWi-Fi. Tarisa uone ichi Apple chinyorwa chinyorwa chinonzi iOS: Kubatana neWi-Fi kune mirayiridzo nezvekuti ungabatanidza sei neWi-Fi uchishandisa yako iPhone.
Chimwe chezvinhu zvikuru zveiyo iPhone ndechekuti kana iwe uchinge wabatana kune yeWi-Fi network kekutanga, yako iPhone inorangarira iyo kubatana uye otomatiki inobatana kune iyo Wi-Fi network kana iri munzvimbo. Kupa iyo sarudzo, yako iPhone inofanirwa nguva dzose shandisa Wi-Fi pane mobile data.
zvemweya zvinoreva makonzo mumba
2. Limit Kutenderera kweVhidhiyo neMimhanzi
Izvo zvakakosha kuti uzive izvo zvinoshandisa zvakanyanya data kana iwe uchishandisa yako iPhone. Kutenderera vhidhiyo nemumhanzi zvinowanzoshandisa iro rakanyanya runhare dhata mune ipfupi nguva. Izvo zvakakosha, saka, kudzikisira kushandisa kwako kwevhidhiyo-kutenderera mapurogiramu senge YouTube, Hulu Plus kusvika iwe paunenge uri paWi-Fi. Zvirongwa zvinoparadzira mimhanzi zvinogona zvakare kushandisa yakati wandei yedhata, asi kumhanyisa mimhanzi kunoshandisa dhata shoma pane vhidhiyo. Pane yangu iPhone, ini ndinongotenderera vhidhiyo kamwechete panguva apo ini ndiri kushandisa nharembozha, asi ini handinetseke zvakanyanya nezve kutenderera mumhanzi kubva kuPandora kana Spotify.
Kana iwe uchida kutarisa vhidhiyo pane yako iPhone, kunyanya panzendo refu, edza kurodha vhidhiyo ku iPhone yako usati waenda. Kana iwe uchirenda kana kutenga bhaisikopo kubva kuTunes, semuenzaniso, une sarudzo yekuirodha pasi kufoni yako uchishandisa Wi-Fi pamberi penguva. Kana iwe uchitova pazororo uye iwe usina Wi-Fi kuhotera yako, enda kune imwe Starbucks yemuno uye shandisa yavo Wi-Fi kurodha muhombe hombe faira. Ini nguva pfupi yadarika ndakasangana nevanhu vakati wandei vaiita izvo chaizvo.
3. Vhara Mapurogiramu Ako
Kamwe chete zuva rega rega kana maviri, vhara maapplication ako nekukurumidza kudzvanya bhatani repamba kaviri uye kutsvaira pane yega yega app. Zvirongwa zvinogona kutumira uye kugashira data kumashure, uye zvakanyatsonaka, kunze kwekunge chimwe chinhu chikatadza kufamba. Kuvhara iyo app kunoibvisa kubva mundangariro yekushandisa uye inofanirwa kumisa iyo chaiyo app kubva kushandisa yako nharembozha kumashure.
Ndichiri Kushandisa Yakawandisa Dhata?
Kana iwe uchitoziva nezveaya matipi uye iwe uri zvakadaro tichishandisa yakawandisa data, isu tichafanirwa kuenda kumberi uye kuyedza kufunga kuti ndeipi app iri kutumira kana kugamuchira data pasina mvumo yako. Nyaya dzine maapplication anoshandisa yakawandisa data kazhinji dzinoitika nekuti kurodha pasi kana kurodha pasi kuri kukundikana. Mune mamwe mazwi, iyo app inoedza kutumira faira, uye rinokundikana, saka rinoedza kutumira iyo faira zvakare, uye rinokundikana zvakare, zvichingodaro zvichingodaro…
Vhura peji rinotevera , Ini ndinokuratidza maitiro ekutsvaga iyo app irikushandisa yakawanda data , saka unogona gadzirisa chakavanzika ichi zvachose.
Mapeji (1 ye2):